Vaovao SA : Fisaorana Thé-concert 16 avril 2016
Accueil Ireo Sampana Sekoly Alahady Vaovao SA : Fisaorana Thé-concert 16 avril 2016
Manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika avy,
"Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko ; ary izay rehetra ato anatiko, misaotra ny anaran'ireo masina" : Salamo faha 103.
Izany teny ny mpiventy Salamo izany no entinay maneho fisaorana an'Andriamanitra, mialoha ny rehetra noho ny nahatontosa soamantsara ny thé-concert nokarakarain'ny SA ny 16 avril lasa teo. Lehibe tokoa Izy ka mendrika ho deraina ary dia hitantsika taminy fampisehoana nataon'ireo zanantsika ny fiasany.
Misaotra ny filoha nikarakara ny momba ny trano.
Tsy hainay koa ny tsy haneho fisaorana anareo RAD tsy ankanavaka tamin'ny fanampiana rehetra, ny fandraisan'anjara tamin'ny endrika samihafa, ny fikarakarana : nanomboka taminy fananterana ny ankizy nanao famerenana, ny zaitra ny akanjo, ny fanamboarana ireo mofo mamy, ny fitanterana ny kojakoja rehetra, ny fanaingona ny trano, ny fandaminana, sns...hialana tsiny raha tsy votanisa avokoa. Tsapanay fa tsy nikely aina ianareo tamin'izany.
Manatitra fisaorana manokana koa izahay ho an'ny sampana ZVM izay nanaraka am-pitiavana ny ankizy teo amin'ny fitendrena.
Tsy adinonay koa ny fisaorana ny SVK izay nandray am-pitiavana ihany koa ny fikarakarana ny fizarana ny mofo mamy sy ny thé, café, sns...
Misaotra ihany koa ny nampindrana ny rétro-projecteur.
Farany, misaotra anareo mianadahy izay nisahana ny teo amin'ny "caisse" izahay.
Misaotra an'ireo rehetra nitondra am-bavaka.
Mifona aminareo izahay raha toa ka misy adino amin'izao fisaorana izao.
Ny Tompo be fitia anie mbola handrotsaka ny fahasoavany amin-tsika avy ary hitahy mandrakariva.
Aminy anaran'ny SA FPMA Melun.